Ndozi ụlọ ezumike na ọnlaịnụ kacha mma, akwụla ụgwọ maka ezumike gị
Jiri igwe nyocha iji tinye ụlọ nkwari akụ gị
You na-eche echiche ime njem ma ọ maghị ebe ị ga-ebido? Ọfọn, dị ka nnukwu akụkọ si kwuo, anyị ga-eme ya site na mmalite. Otu n'ime nchegbu mbụ anyị nwere bụ ụlọ nkwari akụ. O doro anya na anyị na-achọ chọta ọnụ ala hotels nke ahụ nwere ọnọdụ zuru oke nke mere na anyị agaghị echefu ọnụnọ anyị. Taa, anyị na-enyere gị aka na ya!
Pịa ebe a ka ị deba ọnụahịa kacha mma na ịntanetị
Esi achọta họtelu dị ọnụ ala na ịntanetị
Abịa n’ịchọ ezigbo họtel maka ezumike anyị ọzọ, anyị agaghịzi eji ọtụtụ awa na-ele anya n’otu akụkụ ma ọ bụ n’akụkụ nke ọzọ. Ugbu a, i nwere ike ilekwasị anya na mbọ gị niile na ọrụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ nkwari akụ akọwapụtara, ka anyị duzie anyị họtel chọta. Na nke a, ọ ga-abụ ụzọ kachasị mfe ma dị mfe ị ga-enweta ozi niile n'otu ntanye.
Nhọrọ ọzọ ịchọta elu hotels Ọ dị na ụlọ ọrụ ndị ahụ site n'ịntanetị. N'ezie, ọzọ, ị ga-eche na mgbe ọ bụla enwere ndị nnọchi anya nke ụdị a, ọnụ ahịa ga-arị elu.
Ị nwere ike gaa na họtelu page N'ezie, oge ụfọdụ, ọ bụghị mgbe niile ka ha na-enye gị uru ma ọ bụ ọnụahịa nke anyị niile nwere ike ịhụ.
Nzọụkwụ iji chọta ụlọ nkwari akụ dị ọnụ ala n'ịntanetị
Ndi ozo: Tupu mee ndoputaỌ dị mma mgbe niile ịmụ obere ntakịrị ebe anyị na-aga ezumike. Chọọ ozi ma ọ bụrụ na ụdị ihe omume ọ bụla na mpaghara a họọrọ. Nke a bụ n'ihi na ọ bụrụ otu a, ọnụ ahịa na-adị oke ọnụ.
Obodo ndị dị nso: Ọ bụrụ n'ikpeazụ ị chọta nke ahụ, na ndị ahụ ụbọchị ezumike gị, ebe a na-aga oriri na nkwari n'ihi na ichoro uzo ozo. Echiche kachasị mma bụ ịhọrọ obodo ndị gbara ya gburugburu. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-adị nso ma nọrọ obere na họtel.
N'aga n'ihu: Obi abụọ adịghị ya, mgbe anyị maraworị ma doo anya banyere ebe anyị ga-aga, mgbe ahụ ọ kacha mma ịme ndoputa ahụ n'oge adịghị anya. Ọganihu nwere ike ịzọpụta anyị pụọ na ụlọ nrọ. Tulee maka azụmahịa ụlọ nkwari akụ niile ma ọ bụ naanị na nri ụtụtụ. N'ihi nke a, anyị nwere ike ịhọrọ ugbu a dabere na mkpa anyị.
Gọọmenti rụrụ ma ọ bụ ezumike nka: Anyị amaworị na anyị niile nwere ike nrọ nke nnukwu ụlọ nkwari akụ, ma n'ezie, ọtụtụ n'ime anyị ga-emefu ego. Yabụ, ọ bụ oge itinye ụkwụ gị n'ala wee chọọ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị ga-anọ ụbọchị ahụ dum site n'otu ebe gaa ebe ọzọ, ọ kachasị mma ịhọrọ maka nkwari akụ. Kacha mma ga-abụ na a na-akpọ gọọmenti rụrụ ma ọ bụ ezumike nka. Zuru okè ebe na-asa na zuru ezu awa.
Freemụaka anaghị akwụ ụgwọ: Ọ bụrụ na gị na ụmụaka na-eme njem, ọ naghị afụ ụfụ ịchọ nhọrọ ndị ahụ nke ga - enyere anyị aka iwetulata ọnụahịa. Dabere na afọ, e nwere ọtụtụ ọnụ ala hotels Ha agaghị ana gị ego ka nwatakịrị dinara n'otu ụlọ. Naanị ile anya nke ọma na amụma nke ọnọdụ ha.
Etu esi enweta ụlọ nkwari akụ na ntanetị?
Taa anyị nwere ihu ọma inwe ịntanetị. Obi abụọ adịghị ya, otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma iji mee ka ndụ dịkwuo mfe. Mgbe anyị na-eme njem, anyị na-ahụkwa mbara igwe dị na ya. Want chọrọ de akwukwo na ntaneti? Ọfọn, ọ bụ ihe kachasị mfe.
Ọ bụrụ na ị lelelarịrị ma nweelarị ụlọ nkwari akụ ịchọrọ maka ezumike gị, mgbe ahụ nzọụkwụ ọzọ bụ ịme ndoputa. Iji ghara ọtụtụ ndị na-enweghị uche, anyị kpebiri ịchọta ụlọ ọrụ nkwari akụ (pịa ebe a iji nweta ma tinye akwụkwọ na ọnụahịa kacha mma). Ọ ga-arụrụ anyị ọrụ niile. Naanị anyị kwesịrị ịbanye ebe ahụ ma ọ bụ ya. Ọ bụrụ na ị họrọla maka ya, ị ga-abịa na ọtụtụ họtel nhọrọ. N'ime ha, ị ga-ahụrịrị àgwà ya niile. Site na ọnọdụ gaa na ihe oyiyi kachasị nkọ iji nweta echiche. Ozugbo i kpebiri, ị ga-ahọrọ nke kachasị kwenye gị. Site na ịpị a nhọrọ, ị ga-enweta a ọhụrụ na peeji nke na-enwe ike họrọ ime ụlọ. N'ebe ahụ ị nwere ike ịlele ndị niile nwere onwe ha yana ụbọchị dị. Ozi a niile, ịnwere ike ịhọrọ ya n'ụzọ dị mfe ma site na sofa gị. Mgbe i mechara ihe niile, ị ga-pịa ịnabata ma ndoputa ga-adị irè.
Reviewslọ nkwari akụ nyochaa n'ịntanetị
Uzo ozo di ike mgbe ichoro ime ulo na họtelu bu igu ihe ndi ahia gha agha. N'ezie, ọ bụghị mgbe niile ka ha na-eme nke ọma na ọ bụ ya, na uto ọ dịghị onye na-achị. Ma, ị nwere ike ịmata ihe ọtụtụ ihe na ebe ị họọrọ. Dịka iwu, a na-atụle ihe ndị dị ka ịdị ọcha na mkpọtụ. Abụọ isi ihe mgbe ọ na-abịa ịhọrọ otu ma ọ bụ ebe ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ọ dịkwa mkpa na ha nwere a 24 hour n'ikuku. Karịa ihe ọ bụla n'ihi na anyị amaghị mgbe anyị ga-abata na ozugbo anyị ruru ebe ahụ, anyị ga-anọkarị n'èzí karịa n'ime. N'otu ụzọ ahụ, ị ​​ga-achọpụta ihe owuwu na otu esi eji ha eme ihe. Anyị ga-ahụkwa nke a dị ka nyocha na ikwu okwu. Mgbe ụfọdụ ọ na-aka mma iji obere oge gụọ akwụkwọ, ebe ị ga-ahụ etu ozi ahụ si malite iwepụta onwe ya. Ọ bụ ezigbo ụzọ iji mata ebe, tupu ị ruo ebe ahụ.